अनुभूति: हामीले छोरी जन्माउँदा ‘कन्जुसवाला’बधाई दिनेहरुका नाममा ! - Dainik Nepal
अनुभूति: हामीले छोरी जन्माउँदा ‘कन्जुसवाला’बधाई दिनेहरुका नाममा !
सरगम भट्टराई २०७४ वैशाख ८ गते १२:४६
झण्डै दुई बर्ष पहिले मेरी श्रीमती ज़ब पाँच महिनाकी गर्भवती थिईन् त्यसबेलानारायण काकाकी छोरी मेनुका दिदीले खुसुक्क सोध्नु भएको थियो: ए नानी भन् नतेरो पेटमा बाबु छ कि नानी ? चेक त गराईस् होला नि ?
“ह्या दिदी ! छोरा छोरी जे भए पनि के भो र अहिलेको जमानामा ? त्यसमाथि पनिपहिलो बच्चा ।”
मेरी श्रीमतीले हल्का झर्के जस्तो गरी जवाफ दिएकी थिईन् । मेनुका दिदीले हामीलेछोरा छोरी पहिचान गरेनौँ भनेको कुरा सायद पत्याउनु भएन ।
एकदिन टिचिंग अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गर्न जाँदा बसमा एक जनाअर्धबैँसे महिला भेटिईन्: ठूलो पेट लुकाएर लुक्ने कुरा भएन, गर्भवती भन्ने कुराथाहा भईहाल्यो । उनले बोल्ने निहूँमा सोधिहालिन् ,”नानी ! कति महिना भो नि ?”
श्रीमतीले उत्तर दिईन्: ६ महिना पूरा भो ।
अनि के छ नि ! छोरा कि छोरी ? चेक त गराएको होला नि ?
उनलाई पनि उही स्पष्टिकरण दियौँ हामी दुबैले। नाता,गोता, साथी भाइ सबैले यहीप्रश्न उत्सुकताका साथ सोधिरहे । हाम्रो उत्तर त उही एउटै हुने भयो ।
ती मध्ये कसैले पनि मेरी श्रीमतीको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा एक औपचारिक,अनौपचारिक शब्द खर्चेर सोध्ने चेष्टा गरेनन्, जसको पहिलो गर्भ पाँच महिनामैमिसक्यारियज भएको थियो, त्यसैले डाक्टरको नियमित परिक्षण गरिरहन पर्थ्यो।
मलाई पनि केही बर्ष पहिले त छोरी भन्दा छोरा नै मन पर्थ्यो: छोरा र छोरीमाबिभेद गरेर होईन, छोरीलाई हेर्ने यो समाजको नज़रसंगै प्राकृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा छोरीलाई बढि कष्ट भएको देखेर । रजस्वला हुनुपर्ने, बिहेपछि अर्कैको घरमा जानुपर्ने, आमा हुनुपर्ने, आमा हुन नसक्दा सौता बेहोर्नु पर्ने, बिधुवा हुनुपर्ने, घरेलू हिंसा, सामाजिक बन्धन आदि आदिले गर्दा बरु मेरो पहिलोबच्चा छोरा नै होस् भन्ने लाग्थ्यो ।
पछि मलाई मेरै धारणा कमजोर लाग्यो, युरोप अमेरिकामा छोरा भन्दा छोरीले नैआफ्ना बाबु आमालाई हेरचाह गरेको देखियो । राम्रो शिक्षा दीक्षा र संस्कारको तारतम्य मिल्यो भने छोरी पनि छोरा भन्दा कम हुन्नन् भन्ने कुरा देखियो, सुनियो।
गर्भावस्थाको नौ महिनाको कठिन क्षणमा मैले मेरी श्रीमतीलाई आफूले जानेबुझेको भावनात्मक र भौतिक सहयोग गरेँ, कसैले सोध्दा श्रीमती मात्र हैन हामीप्रेग्नेन्ट छौँ भन्थेँ म । खाना बनाउने, लुगा धुने, किनमेल गर्ने आदि काम सबै जसोमैँ गर्थेँ, हेर्नेहरु दंग पर्थे, कोही कोही त आरिसले जल्थे पनि । मैले मनमनै सोच्थेँ: यदि मेरो पेटमा उनको जस्तै बच्चा भएको भए मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो होला ?
मेरी गर्भवती श्रीमती उठ्दा, बस्दा, हिड्दा उनले असजिलो मानेर पीडाले अनुहारबिगारेको देख्दा मेरो आङ जिरिङ्ग हुन्थ्यो । मिल्ने भए यस्तो लाग्थ्यो: उनको सबैपीड़ा मै माथि बोकूँ तर यो त कहाँ सम्भव थियो र ?
नौ महिना पुगेपछि हाम्रो प्रतिक्षाको घड़ी समाप्त भो, ड्यू डेट आएपछि अलि बढिअप्ठेरो भएको बेला मैले महाराजगंजको टिचिंग अस्पत्ताल दौड़ाई हालेँ, जुनवेला रातको दुई बजेको थियो । अस्पताल पुगेको एकैछिनमा उनलाई भर्ना गरिहाले । युरोप अमेरिकामा जस्तो छेवैमा बसेर प्रशव पीड़ा अनुभूति गर्न त्यहाँ नदिने हुनाले म बाहिर कुरेर बसिरहेको थिएँ । केही डर र केही कौतुहलताका साथ एक्लै बाहिरकुर्दा अलग्गै अनुभूति भएको थियो ।
क़रीब आधा घन्टामै लेबर रुमको ढोका खोलेर बाहिर निस्कदै एउटा नर्स बाहिर म कुरिरहेको ठाउँमा आईपुगिन् र चिच्याईन्, “प्राप्तीको हस्बेण्ड को हुनुहुन्छ ?”
मेरो होश हवाश गुम्यो, एकै छिनमा रातों पिरो भएँ अनि हड्बडाउँदै सोधेँ: बैनी ssssसब ठिक त छ नि ? अपरेशन गर्न त पर्दैन नि ? रगतको जोहो गर्नु पर्ने त होईन ? एकैपटक तीन प्रश्न सोधेँ मैले ।
म हड़बड़ाएको देखेर नर्सले हाँस्दै भनिन्: “दाई हजुरको बच्चा भयो बच्चाको लुगा रब्ल्याङ्केट ल्याउनू है ! अनि बिरामीलाई सूप पनि !”
अब भने म ढुक्क भएँ यो खबर मेरो लागि थिएन, कोही अर्कैको नाम मेरो श्रीमतीसंग मिल्न गएको थियो । मैले अडान लिएर भनेँ: सिस्टर प्राप्तीको थर के हो ? मेरोश्रीमती त भट्टराई पो त ! भर्खर आधा घन्टा पहिले आएको ।
हो हो ! तपाईकै बच्चा भो । छिटो जानुस, ढिलो भयो । नर्स अलि कड्किईन् । पहिले पहिले धेरै कड्किने नर्सहरु देखेको मैले यसपाली अपेक्षाकृत नरम नै अनुभव गरेँ ।
मैले कपाल कन्याउदै सोधेँ: सिस्टर कस्तो रंगको ब्ल्याङ्केट ल्याउँ: निलो कि गुलाबी ?
नर्सले ठाडो भाषामा भनिन्,”आफूलाई मन पर्ने ल्याउनू न ।”
मैले भने: मलाई जे भए पनि फ़रक पर्दैन तर जे हो त्यही भन्नु न प्लिज !
उनी अलि कड़ा बोलिन्: दाई के ज़िद्दी गरिरा होला ? अहिले एकै छिनमा थाहा भै हाल्छ नि ! खुरुक्क जानुस न, अहिले भन्न मिल्दैन ।
सिस्टर नानीलाई यो प्रश्न सोधिरहन मलाई मन लागेन । मैले अर्को प्रश्न पनि सोध्न लाग्दा उनी वार्डमा फर्कनै आँटेकी थिईन् । बैनी सुन्नुनप्लिज ! एउटा मात्र प्रश्न है ,”आमा र बच्चा त ठिक छन् नि ?”
उनले हाँसेर भनिन्,”एकदम स्वस्थ्य बच्चा छ, आमालाई पनि ठिक छ अपरेशन पनि गर्नु परेन, नर्मल भो । ल अब त जानुस ! उनले मलाई हातले बाहिर जान इशारा गरिन् ।
मेरी आधा अंग र हाम्रो मायाको प्रतिबिम्ब, मुटुको टुक्रालाई प्रत्यक्ष देख्न नपाउँदै म बाहिर फार्मेशीमा औषधिहरु र ब्ल्याङ्केट किन्न गएँ । मभित्र एउटा ठूलो रहस्य मडारिरहेको थियो: मनले सोधिरहेको थियो: के जन्मिए होला ?
मैले आफै जवाफ दिन्थेँ: जे भए पनि एकै छिनमा थाहा भै हाल्छ नि !
मैले चाहिने सबै सामान किनेर ल्याएँ अनि नर्सलाई दिएँ । केही बेर पछि आएर बल्ल ती नर्स नानीले भनिन्: दाई हजुरको छोरी भएको छ है !बधाई छ ।
त्यसपछि सुत्केरी र बच्चालाई प्रसूति कक्षबाट जनरल बेडमा सारियो, जहाँ धेरै नवजात बच्चाहरु आमाहरु र कुरुवाहरु थिए । वार्डको बेडमापुगेपछि मैले श्रीमतीको निधारमा चुमेर बधाई दिएँ र छोरीको अनुहार पहिलो पल्ट हेरेँ । छोरीलाई काखमा लिएर चुम्दै यताउता गरिरहेको थिएँ ।
मेरी श्रीमती प्राप्तीले समेत मलिन भएर एकोहोरो मलाई हेरिरहेकी थिईन्: मलाई एक्कासी सोधिन् : “बाबा हजुर खुशी त हुनुहुन्छ नि ?” मैलेनिर्धक्कले भनेँ,”मैले त छोरी नै जन्मोस् भनेको थिएँ नि हैन र ?”
त्यति सानो बच्चा पहिले कहिल्यै नउचालेकोले असजिलो लागेर छोरीलाई बिस्तारै बेडमा राखेँ मैले । त्यति बेलै बाहिर निस्केर सबैआफन्तहरुलाई फोन गरेर सो सुखद समाचार सुनाउन मोबाईलको बटन थिचेँ ।
हेलो… हजुर ! ल बाबा भईयो आजदेखि । बुबा, आमा, सासु, ससुरा देखि मामा माईजु सबैलाई फोन गरेँ मैले । उताबाट जवाफ आउथ्यो: के भयोनि छोरा कि छोरी ?
मैले खुशीका साथ जवाफ दिएँ: भर्खर छोरी भईन्, एकदम स्वस्थ्य र राम्री अनि आमालाई पनि ठिक छ अपरेशन गर्नु परेन । अरुले सोध्थे, सोध्थेनन्: मैले सबै कुरा बताई हालेँ ।
म खुशीले गद्गद हुँदै फोन घुमाईरहँदा केही कुरुवा र सुत्केरीहरुले फेरि पनि छोरी जन्मी भनेर बर्र आँशु झारिरहेका भेटिए । मेरो छेवैमाकुरिरहेका एक अर्धबैँसे युवककी श्रीमतीले त चौथों पल्ट पनि छोरी जन्माएकी रहिछन्, परिवारको दवावमा छोरा पाउने आशामा । जे होस् मफुरुङ्ग थिएँ, धेरै बेर उनको कुरा सुन्ने फुर्सद थिएन मलाई ।
मैले फोन गरेका मेरा आफन्तहरुको अनुहार त मैले देख्न सक्ने कुरा भएन तर उनीहरु मध्ये असी प्रतिशत आफन्तहरु हाम्रो खुशीको खबरमाखुशी थिएनन् । उनीहरु मध्ये धेरैको प्रतिकृया थियो: “ए छोरी पो भयो है ! अनुहार हेर्दा छोरा हुन्छ जस्तो लागेको थियो, पहिलो छोरा भएकोभए ढुक्क हुन्थ्यो । ल ल जे भए पनि बधाई छ ।”
मैले मेरो सबै भन्दा मिल्ने ठूली आमाको छोरा दाजु, मेरो सहपाठी, हरि दाईलाई यो खबर सुनाउन हतार हतार फोन लगाएँ । मलाई आशा थियो: “उनी चाहिँ सबै भन्दा खुशी हुनेछन् , मेरा सहोदर दाजुहरु भन्दा प्रिय दाईले यो खुशीमा बुर्कुसी मार्ने छन् ।”
फोनको घन्टी गयो, मैले छोरी जन्मेको खबर सुनाएँ तर प्रतिकृया चाहिँ उही निराशाकै आयो ! मानौँ हामीले छोरी जन्माएर गल्ती गर्यौँ । हरिदाईले मलाई सान्त्वना दिएजस्तै गरेर भने: छोरा भएको भए ढुक्क हुन्थ्यो है तर केही छैन । प्रितम, भुवनले पनि खासै खुशी ब्यक्त गरेनन् ।मामा,माईजु, केशव दाई सबैले मलाई सान्त्वना दिनको लागि कन्जुसवाला बधाई दिए ।
मैले कसैको प्रतिकार फोनमा गरिन, भेटमै बिस्तार गर्ने निधो गरेँ । सायद उनकी दुईवटी छोरी भईसकेर हो या अन्य कुराले हो, हरि दाईले भनेअन्तमा कन्जुस पूर्वक बधाई दिए । मैले कल्पना गरेँ , सायद छोरा भएको भए धेरैको प्रतिकृया यस्तो हुन्थ्यो: “वाह ! धेरै धेरै बधाई छ यार,बंश थामियो तेरो, अब ढुक्क भयो, बुढेसकालमा सहारा हुने भो, ल अब भब्य पार्टी मनाउनुपर्छ, छैँठीको मेसो मिलाउनु पर्छ।”आदि आदि ।
मैले मेरा स्मृतिहरु ताजगी गरेँ । मलाई कता कता नरमाईलो लागिरहेको थियो । मेरै छिमेकी जानकी दिदीले दुई छोरी पछि पनि छोरी नै गर्भरहँदा चारपटक सम्म गर्भपतन त्यो पनि अत्यन्त असुरक्षित स्थान र समयमा गरेको कुरा आँखै अगाडि आएको थियो, त्यही कारणले गर्दाउनी कमजोर र रोगी भईसकेको मैले मेरै आँखा अगाडि देखेको थिएँ, गाउँका सीता, मीना, मनिता, लक्ष्मी, ज्ञानु, सरस्वती सबैको त्यही हालथियो, छोराको आसमा कैयौ भ्रूणहरु समय अगावै फालिएका कुरा एक कान दुई कान मैदान भईहाल्थे ।
नाम त म लिन उचित ठान्दिन तर छोरी भन्ने चिनेर भ्रूण हत्या गर्नेहरु नै शुभ कार्य गर्दा पन्चकन्या खोज्न गाउँ तिर लाग्थे।
मेरी फुपुका छोरा प्रकाश दाजुकी श्रीमती गोमा भाउजुले लगातार चार वटी छोरी पाएपछि पनि हात हेर्नेले फेरि पनि छोरी जन्मने कुरा बताए ।दाजुले गोमा भाउजुको आग्रहमै दोश्रो बिहे गर्नु भयो, त्यसो त संयोग मात्र हुनुपर्छ: दोश्री पट्टि लगातार दुईवटा छोराहरु जन्मे । दुई चार बर्ष तठिकै भो, त्यतिबेला हाँसी हाँसी सौता भित्र्याउने गोमा भाउजु अहिले सौता संग मिल्न नसकेर अलग्गै बस्नुहुन्छ ।
सबै घटना परिघटनाहरु हेर्दा यस्तो लाग्यो: हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीको बिचमा गहिरो खाडल छ । मान्छेहरुलाई जस्तो भए पनिछोरै चाहिन्छ । पहिले पिण्ड दिने छोरा चाहिन्थ्यो तर अहिले नामकै लागि पनि छोरा चाहिन्छ भन्छन् मान्छेहरु। त्यही छोराकै प्रसंगमा सासु,बुहारी, श्रीमान्, श्रीमती आदि बिच सम्बन्धमा दरार आउँछ ।
१५ बर्ष अघि चार छोरी पछि छोराको आशमा पाँचौ सन्तान जन्माएकी सुनिता दिदीले पनि तीन पटक गर्भपतन गराईन्, जुनवेला उनी चालीसबर्षको आस पास पुगिसकेकी थिईन् । गर्भमा छोरा भएको पक्का भएपछि उनले पाँचौ सन्तान जन्म दिईन् ।
अहिले उनको छोरा सानै छ, तर लाड़ प्यार पाएर हुर्केकोले १४ बर्षमै कुलतमा लागेर बिग्रिएको छ, छोरीहरु सबैको बिहे भैसकेको छ, तर बाबाआमालाई पर्ने सबै गाह्रो साह्रोमा छोरीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । अहिले सुनिता दिदीको घैँटोमा बल्ल घाम लाग्न थालेको छ: “मैले छोराछोरा भनेर गल्ती गरेछुँ ।” किनकी बूढेसकालमा जन्माएको त्यही छोरा अहिले उनीहरुको चिन्ताको कारण बनेको छ ।
मैले मेरै घरमा फर्केर हेरेँ: २०३० को दशकमा पहाड़ देखि पढ्न भनेर मेरो दाजु तराई आउनु भयो तर तीनवटी मेरी दिदीहरुले त्यो बेला पढ्नपाउनु भएन, सायद दिदीको ठाउँमा दाजुहरु जन्मेको भए जसो तसो पढाउनु हुन्थ्यो होला । हुन त मेरो बुवा पुरानो पुस्ताको भएर होला: ठूलीभाउजुले दुईटी छोरी पाउँदा सुत्केरीमा भेट्न नगए पनि तेश्रो पल्ट छोरा पाउँदा तुरुन्तै भेट्न जानु भएको थियो ।
यी त बिगतका कुरा भए, वर्तमान पो कहाँ सच्चिएको छ र ? संसारका अति बिकसित देशहरुमा पनि महिला र पुरुषलाई एउटै आँखाले हेरिदैन।
अमेरिका जस्तो बिकसित देशमा राष्ट्रपतिको चुनाव अगावै चुनावको परिणाम के होला भनेर मैले सोध्दा धेरै पुरुष त के महिलाहरुले नै भन्थे:संसारको नेतृत्व गर्ने अमेरिकालाई महिला हैन हिम्मती पुरुष राष्ट्रपतिको खाँचों हुन्छ । परिणाम पनि त्यतै गयो चौवालिस पल्ट पुरुषराष्ट्रपतिलाई जिताएका अमेरिकनहरुले कड़ा प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि एउटी सशक्त महिला हिलारी क्लिन्टनलाई निर्वाचित गर्न सकेनन् ।
हाम्रो देशमा त अहिले पनि राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गमा महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर बिडम्वना अझै पनि छोरा छोरी बिच भेदभाव,दाईजो प्रथा,बोक्सी प्रथा, छोरीलाई छोरा सरह नपढाउने आदि झाङ्गिएकै छ ।
अहिले हाम्री छोरी कृष्मा डेढ़ बर्षकी पुगि सकिन्,पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै उज्याली र स्वस्थ्य छिन्, हिजो हामीलाई खुलेर शुभकामनानदिनेहरुको अगाडि पनि उनी हाम्रो हिमाल जस्तै हाँस्छिन्, यस्तो लाग्छ उनले सबैलाई कड़ा जवाफ दिईरहेकी छिन्: “म छोरी भएर जन्मदाखुशी नहुने तपाईहरु सबैको धारणा परिवर्तन गर्ने छु ।”
उनको मुस्कानमा हो मा हो मिलाऊँदै हामी पनि भन्छौँ: हो छोरी हो! तिम्रो दृढ़ता पूरा गर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौ । छोरी प्रतिकोधारणा संबिधानत: फेरिए पनि ब्यवहारत: फेरिन धेरै समय लाग्नेछ । हामी र हाम्री छोरीले यो धारणा परिवर्तन गर्न अन्तिम सम्म लडिरहनेछौँ । हैन भने हामीलाई जन्माउने आमा पनि छोरी, यो संसारकी सृष्टिकर्ता छोरी जन्मेकोमा के को रोईलो होला ?
एक दिन कुराको सिलसिलामा मेरी अर्धाङ्गिनी प्राप्तीले भनेकी थिईन्,”यो समाजलाई अझै जवाफ दिनुछ, हे भगवान ! हामीलाई अर्को पल्टपनि छोरी जन्मियोस् !”
मैले सहमतिको टाउको हल्लाउँदै भनेँ: ठिक भन्यौ, हामीलाई छोरी जन्मेकोमा बधाई नभन्नेहरुलाई जवाफ दिनुछ ।
केपी ओलीको निर्देशन नमान्ने युरोपियन युनियनलाई जनताले लखेट्ने !
र, यो पनि सर्वेन्द्र समय !
अप्पा भिल्लाको कथा– आउला त नेपालमा विदेशी लगानी ?